Yoga-Yokomoya | Eyedwarha 2021
Uzigcina njani iiIdols kwigumbi lasePooja
Kukho imigaqo ethile yokugcina izithixo kwigumbi lasePooja. Sikuxelela indlela yokubeka izithixo kwigumbi le-pooja. Kwaye kufuneka kweliphi icala isithixo
Izibonakaliso Zeliso Elijingayo
Ukutswina kwamehlo kubaluleke kakhulu kwizibhalo zethu. Kuyatshiwo ukuba indalo izama ukunika izinto ezahlukeneyo endodeni xa ilihlo lalo lijijeka. Lubonakaliso kwinto entle okanye evuselelayo enokwenzeka. Funda ukuze wazi ngakumbi.
Kutheni le nto abantu banxibe umtya omnyama ejikeleze i-Ankle yabo?
Ngamanye amaxesha, kusenokwenzeka ukuba ukhe ubabone abantu benxibe umsonto omnyama bejikeleza amaqatha abo, intamo, isihlahla okanye isinqe kwaye oko kungakothusa. Kwimeko apho uzibuza ukuba kutheni kwaye ubalulekile emva kokuba uyenzile, skrolela ezantsi kwinqaku ukuze wazi ngakumbi.
19 Ii-avatars zeNkosi uShiva
Ngaba uyazi ukuba u-Lord Shiva naye unee-avatars? Ngapha koko, u-Lord Shiva unee-avatara ezili-19 ke ngoko, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngee-avatata ezili-19 zeNkosi uShiva funda
Nokuba siyigcina iShivinga ekhaya okanye akunjalo ngumba ophikisayo kumaHindu. Kodwa, kubalulekile ukuba uyazi imigaqo ebalulekileyo yokugcina iShiva Linga ekhayeni lakho. Funda uqhubeke.
Uluhlu lweAmavasya Imihla 2019
Amavasya ngumhla weshumi elinesihlanu weeveki ezimbini. Amavasya ligama laseIndiya losuku lwenyanga entsha. Nalu uluhlu olupheleleyo lwemihla yeAmavasya ngonyaka ka-2019, kunye namaxesha amahle kunye ne-puja muhurat. Funda ngokugqithisileyo.
Sarees To Drape Kuba uthixokazi uLakshmi kwiKalasha
Nazi iindidi ezahlukeneyo zeesesisi onokuthi uthandele uthixokazi lakshmi kwiVaramahalakshmi.
Imfihlelo yeeModyuli Emzimbeni Wakho
Funda kwaye ufumanise ukuba yintoni imole nganye emzimbeni wakho isixelela ngobomi bakho kunye nobuntu bakho.
USwami Vivekananda uhanjiswe ngeNtetho yeMbali eChicago Ngale mini ngo-1893
Usuku lokuzalwa lukaSwami Vivekanandas lubhiyozelwa njengoSuku loLutsha lweSizwe. Wazalwa njengoNarendra Nath Dutta kusapho lwamaBangali olunobungangamsha eCalcutta. Nazi iinyani ezili-10 ezinqabileyo malunga neSwami Vivekananda. Thatha ujongo.
URaksha Bandhan 2019: Iingcaphuno kunye nemiyalezo kuMntakwenu noDade wakho
URaksha Bandhan, ophawula ukubhiyozelwa kobudlelwane obukhethekileyo phakathi kwabazalwana noodade, uzakubhiyozelwa ngomhla we-15 kweyeThupha kulo nyaka.
Ukunqula oothixo bamaHindu ngokusekwe kwiintsuku ezahlukeneyo zeveki
Kwintsomi yamaHindu, kukho oothixo abaninzi abanqulwa ngabantu kwihlabathi liphela. Kodwa umntu anganqula oothixo abo ngokweentsuku ezahlukeneyo zeveki. Kwimeko apho ungazi ngayo, funda eli nqaku.
I-Barbarika: Iqhawe elalingaphelisa iMfazwe yaseMahabharata eMzuzwini
Ngaba uyalazi ibali likaBarbarika onokuthi aphelise umlo waseMahabharata ngomzuzu? Waziwa ngokuba nguKhatu Shyam Ji. Funda uqhubeke
URaksha Bandhan 2020: Kutheni Sibhiyozela uMzalwana uDade uBonding?
Ubudlelwane obukhethekileyo phakathi komzalwana nodade wabo abunakuchazwa ngamagama. Thina maNdiya sifuna nje isizathu sokubhiyozela kwaye ke, njengeminye imithendeleko, i-raksha bandhan ikwanokubaluleka okukhulu kuthi sonke. Kulo nyaka kuyangqubana nosuku lokuzimela lwe-Indias.
Ukuthenga njengemihla yeveki
Kuthiwa akufuneki sithenge izinto ezithile ngeentsuku ezithile zeveki. Apha sizise lonke ulwazi kuyo apho ungazi ukuThengwa ngeentsuku zeVeki. Funda ngakumbi kwiVenkile ngokweentsuku zeveki.
UGugu Gobind Singh Jayanti: Izicatshulwa ezili-12 zokukhuthaza, Imiyalezo eya Kukukhuthaza ukuba Utshintshe ukuze ube ngcono
Guru Gobind Singh, uGugu weshumi wamaSikh waphefumlela abantu abaninzi kwiimfundiso zakhe. Iimfundiso zakhe zibhalwe kwiGugu Granth Sahib. Ke ngoko, namhlanje kwisikhumbuzo sokuzalwa kwakhe, sizise ezinye zeengcaphuno zakhe ezikhuthazayo.
Uthixokazi uSaraswati Mantras kunye neziBonelelo
Uthixokazi uSaraswati uthixokazi wolwazi, ubulumko, ubugcisa, umculo kunye nokufunda. Abafundi bacetyiswa ukuba bamnqule ukuze bakwazi ukufumana ulwazi. Nazi iingqokelela zikaThixokazikazi uSaraswati Mantras kunye nezibonelelo zayo. Funda ngokugqithisileyo.
Ukubaluleka komoya kwamaLizard kubuHindu!
KubuHindu, amacilikishe awela kumalungu omzimba aneempawu ezikhethekileyo kunye nokubaluleka ngokomoya. Ukutswina kwamantshontsho kuthathwa njengongcwele kwaye kuyinto entle.
Ungaze wenze ezi zinto zintlanu kwiMauni Amavasya
Mauni Amavasya yenzeka nge-4 Feb 2019. Usuku oluhle kwisithethe samaHindu, iMauni Amavasya ithathwa njengosuku olunethamsanqa lokwenza izinto ezahlukeneyo ezilungileyo. Nangona kunjalo, umntu akufuneki enze ezi zinto zintlanu kwiMauni Amavasya. Funda ngokugqithisileyo.
IGudi Padwa 2021: I-10 yee-Quotes ezintle kunye neminqweno onokuthi wabelane ngayo nabantu obathandayo
IGudi Padwa, umnyhadala owaziwayo wamaHindu obhiyozelwa ikakhulu eMaharashtra naseGoa ujikeleze ikona. Abantu bazokubhiyozela lo mnyhadala nge-13 ka-Epreli 2021. Nazi ezinye zezicatshulwa onokwabelana ngazo nabantu obathandayo.
Kutheni le nto singafanele ukulala sijonge eMantla njenge-Mythology yamaHindu
Kuthiwa ukulala kwicala elingasemantla akulunganga. Kodwa funda ukuze wazi ukuba loluphi olona khokelo lulungileyo lokulala ngokwentsomi yamaHindu kwaye Kutheni Sifanele Singalali Sijongane Emantla NjengeeNtsomi zamaHindu.
indlela yokunciphisa amanqatha obuso kubafazi
Ngaba ubusi buyanceda ekwehliseni ubunzima
ungalahlekelwa njani ngamanqatha esisu ngokukhawuleza kwiveki
indlela yokwenza rasam ekhaya
indlela yokwenza ulusu lwethu lube mhlophe kwaye lube mhle